Version 0.8.3 – Wijetị si shortcode
Ike 30, 2012 site na rịọ 11 Comments
Nke a na version fixes ụfọdụ chinchi na-agbakwụnye, nkwado maka ọmarịcha shortcode na-enye gị ohere ka wijetị n'ime osisi
Dị ka ihe atụ, nke a:
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Hapụ ọkwa Akpado Na: obere, tọhapụ, shortcode
August 2, 2012 na 6:57 obi
Nwere ike ị na-agwa m ma ọ bụrụ na nke a plugin na-eji Curl ma ọ bụ libcurl ?
August 2, 2012 na 8:31 obi
M na-eche ya libcurl na phpcurl n'ọbá akwụkwọ ọrụ
August 15, 2012 na 8:45 na
Mgbe ị na-aga hapụ a ọhụrụ version, na niile patches?
August 15, 2012 na 11:36 na
Ka anya dị ka ọ dị njikere… 🙂
September 11, 2012 na 8:37 na
Olee ebe anyị pụrụ ịmụta ihe ndị ọzọ banyere shortcode?
Dị ka ihe atụ, esi etinye ya WP wuru na-menus?
Na ihe mere flags na-anaghị egosipụta mgbe m na-eji ya (naanị checkbox)?
September 11, 2012 na 12:31 obi
Ị pụrụ ịhụ na ihe nile banyere ndị shortcodes on http://trac.transposh.org/wiki/ShortCodes.
Amaghị m ma ọ bụrụ na ọ ga-eji n'ime wuru na-menus, ma ị nwere ike mgbe niile na-agbalị.
Ọ bụrụ na flags ga-anaghị egosipụta, zipu url na reply na m ga-enwe obi ụtọ na-ele ya anya.
September 16, 2012 na 6:42 obi
Lee bụ njikọ, na ị pụrụ ịhụ checkbox na elu-nri akuku.
Na shortcode m nwere bụ
[tp wijetị ="flags / tpw_flags_css.php"]
N'agbanyeghị, gị isiokwu banyere shortcodes na ị banyere nke a dị ka otu n'ime ọtụtụ ndị ojiji nke wijetị, ma e nweghị ndị ọzọ ntuziaka, esi gbanwee ya. Dị ka ihe atụ, esi wepụ ụfọdụ flags, mgbanwe formatting, ngosi adaala, wdg?
September 16, 2012 na 10:16 obi
M ka na-aghọtaghị njikọ, biko gbalịa na ịkpọtụrụ anyị na-etolite.
banyere ọkọlọtọ mwepụ, wijetị na-egosi na ndị na-asụ asụsụ ị na-ahazi ya maka na ntọala.
dobe njem na ndị ọzọ na wijetị nwere ike họọrọ iji a dị iche iche wijetị file, ịhụ wijetị subdirectory nke plugin
September 17, 2012 na 6:08 obi
Ndo, ikasiakke njikọ. ọ http://bit.ly/QnJWAf
Ka ọ flags ezie.
September 17, 2012 na 6:18 obi
Cheregodi, Olee otú m ga-eleba ị, ma eleghị anya, site na gị na mbụ aha?
dị nnọọ na-echeta, si a nnọọ ogologo oge gara aga, ebe m arụnyere Transposh plugin, mgbe ọ na-arụ ọrụ, ekpe menu na Dashboard kpamkpam. Mgbe plugin na-deactiveated, na menu na-egosi ọzọ. Ị nwere echiche mere?
Ebe a bụ a nseta ihuenyo
September 28, 2012 na 6:04 obi
Ebe a na-a di na nwunye nke aro nke ga-mma n'ụzọ dị ukwuu na plugin si usability na-eme ka m nwere ike ikwu na ọ ka m ngalaba-ọrụ na mmekọ. (Ọ pụrụ na a na-atụ aro tupu, ma m hụrụ ihe ọ bụla Ama).
1. Mejuputa keyboard Ụzọ mkpirisi na ụzọ ndị ọzọ na ngwa ngwa ịgbanwee ọzọ ederede ngọngọ aka ịsụgharị on a page.
2. Mee plugin ịghọta e-mail adreesị, URLs ọdịnaya ndị ọzọ na-ekwesịghị mgbe a ga-sụgharịa.
3. Gụnye otu nhọrọ idetuo-mado ihe dum page si translation. Mgbe ụfọdụ, ọ dị mfe na-asụgharị na mpụga nchịkọta akụkọ, na mgbe ụfọdụ ị na-ama nwere translation njikere.
Ga-abịa azụ na ihe!